🥇 ▷ Roblox wuxuu joogi doonaa Xbox Open House ✅
Roblox wuxuu joogi doonaa Xbox Open House
Roblox waxay noqotay wax ku soo kordha faa iidada ay leedahay. Waa cayaaraha noocan oo kale ah ee caawiya dhisida jaaliyadaha iyo khibradaha ciyaarta. Muhiimad ahaan, waxay umuuqan kartaa wax fudud, laakiin waxay aad uga qoto dheer tahay uguna dhexgal badan tahay ciyaaraha kale ee miisaaniyada weyn leh.
Ciyaarta, oo gaartay in kabadan 90 milyan isticmaaleyaal firfircoon, ayaa la leh Minecraft mid ka mid ah qorshayaashaas xoogga leh ee aan joojinaynin koritaanka iyo ballaarinta meel kasta oo ay karaan. Haddii aad wali shaki ka qabtid fikradeeda, maqaalkan oo ku saabsan “Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Roblox” Waxaan kugu dhaafayaa macluumaad dheeraad ah.
Roblox iyo Xbox One
Wadashaqeynta lala leeyahay Microsoft si wanaagsan ayey u socotaa, dadaallada ay sameeyeen Roblox Corp. iyo kooxda ‘Xbox’ maahan kuwo waqti ku fadhi ah, run ahaantii si wanaagsan ayey ula macaamilaan inkasta oo labadooduba ay u dagaallamayaan saldhigga macaamilka ee jecel ciyaaraha noocan ah.
Cadaynta “jacaylka” ayaa ah in maanta ay masraxa la soo joogi doonaan Major Nelson si ay uga sheegaan wararka ku saabsan ciyaarta kumbuyuutarka Mareykanka. Tan waxaa lagu dhawaaqay maanta iyada oo loo marayo tweet-ka xisaabtaada rasmiga ah.
Wacitaanka dhammaan Seattleites! @JPartyZ iyo soo saaraha Roblox @prismangames wuxuu joogi doonaa Seattle habeenka khamiista ee masraxa @MajorNelson ee @ID_Xbox Guriga Furan#PAXWest wada hadalka ku saabsan horumarka #Roblox. Haddii aad joogtid aagga, nagu soo biir: https://t.co/B8wUQRYDUt
– Roblox Corp (@InsideRoblox) Ogosto 28, 2019
Waxay raacaysaa inay ka wada sheekaysan doonaan xafladda furitaanka ee Redmond ay ugu dabaaldegayso Seattle oo ku saabsan sida ay u horumarinayso Roblox, sidaa darteedna ay qaataan laba ka mid ah kuwa ugu daacadsan uguna raaca hal-abuurka abuurayaasha. Waanu la socon doonaa waxkasta oo lagu kariyo dunida Roblox.